Falastiin Oo Taariikhda Markii Koowaad U Soo Baxday Tartanka Koobka Qaarada Aasiya
HomeWorld Cup 2018Falastiin Oo Taariikhda Markii Koowaad U Soo Baxday Tartanka Koobka Qaarada Aasiya
Xulka qaranka wadanka Falastiin ayaa u soo baxay markii koobaad taariikhda, koobka qaramada qaarada Aasiya Jimcihii, kadib markii ay kulankii kama dambeysta ahaa ka adkaadeen wadanka Philippines, sidaasna ku baneysteen kaalintooda AFC Asia Cup oo sanadka dambe lagu qaban doono wadanka Australia.
Ciyaartan oo ka dhacday jasiirada Maldives ayaa ku dhamaatay 1-0 ay guushu ku raacday Falastiin, taas oo noqonaysa guushii ugu waynayd ee xulka qarankaasi gaadho tan iyo markii la aas aasay xidhiidhka kubada cagta Falastiin sanadkii 1928 kii.
“Hambalyo shacabkaygoow, Falastiin manta waa maalin weyn oo ay u soo hoyatay guul taariikhi ahi,” ayuu damaashaad ka dhex yidhi, Jibril Al-Rajoub, gudoomiyaha xidhiidhka kubada cagta wadanka Falastiin, oo ciyaarta kula daawanayay boqolaal shacabka wadankaas ah , fagaare ku yaala caasimada daanta galbeed ee Ramallah.
Magaalada Gaza, kumanaan iyo kumanaan shacabka reer Falastiin ah oo ciyaarta kala socday muraayado bal balaadhan oo lagu taxay fagaarayaasha magaaladaasi ayaa ciyaarta kadib damaashaad la kala baxay oo tumayay durbaano, kuwaas oo qaarkood kor u tuurayeen nalka dabaaldega ee ifa.
Goolka Falastiin guushu ku raacday, taariikhdana u horseeday , ayaa waxa u dhalliyey laacibka Ashraf Al Fawaghra kubad laad ku laadka xorta ah ahayd oo loo dhigay qaybtii dambe ee ciyaarta.
Madaxweynaha wadanka Falastiin Mahmoud Abbas iyo gudoomiyaha ururka Hamas ayaa labadooduba soo saaray war murtiyeedyo ay ugu hambalyeynayaan xidigaha xulkooda ee guusha taariikhiga ah ku gaadhay wadanka Madlives.
City Oo Qarka U Saaran In Ay Heshiis La Gasho Pogba Iyo Lacagta Badan Oo Loo Ballan Qaaday
Faransiiska Oo Xasuuqay Iceland Una Gudbay Semi Final